Biyo la cabo Biyo → Aqalka • Aqal • Warsi Hantiyeed
Ma u baahan tahay biyo-wade guriga jooga? Shirkadda Water Point ayaa bixisa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah, cabbayaasha, isha laga helo hogaamiyayaasha adduunka ee warshadaha, oo aan annaga u nahay qaybiyaha gaarka ah ee Poland.
Dom waa meesha aan waqtigayaga badan ku qaadanno. Waxaan rabnaa inaan ku dareemno wanaag iyo nabad halkan. Waa halkaan inaan diyaarino cunno, nasiino badanaana aan shaqeyno. Maalin kasta oo guriga ah, anaga iyo qoyska iyo saaxiibbada, waxaan cabnaa galaas badan oo biyo ah. Markaa waxaan filaynaa biyahawaxaan u isticmaalnaa nadiif iyo caafimaad waxaana lahaa dhadhan gaar ah. Raaxo iyo ku habboonaanta helitaanka biyaha noocaas ah ayaa nala siin doonaa Bixiyeyaasha biyaha guriga lagu cabbo.
Helitaanka biyaha nadiifka ah ee nadiifiyaha, kana madaxbannaan microbiological iyo wasakheynta kiimikada, waxay noo oggolaaneysaa inaan caafimaad qabno muddo dheer oo aan intaas sii dheer daryeelayno bey'ada iyadoo yareyneysa qashinka, qashin-qaadashada iyo dhalada biyaha.
Bixiye biyaha iyo cabitaanka biyaha casriga ah ayaa maalmahan lama huraan u ah reerka runtiina nolosha ayaa ka dhigaya mid fudud, maxaa yeelay gabi ahaanba looma baahna in la iibsado biyo dhalo ah ka dibna ku qubeeya tamarta isticmaalkooda. Yaraynta qadarka qashinka ee laga sameeyay qoyskeena sidoo kale waa cunsur muhiim u ah daryeelka deegaanka dabiiciga ah.
Cabbitaanka joogtada ah ee biyo nadiif ah oo nadiif ah waxay hagaajineysaa caafimaadkeena waxayna u horseedaa caadooyin cunno oo habboon xubnaha qoyska ugu da'da yar.
Thanks to the cabbiraha biyaha cabitaanka, waxaad diyaarin kartaa ma aha oo kaliya biyo dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale cusbooneysiinaya liin ama biyo dhalaalaya, iyo naqshadeynta casriga ah ee qalabka ayaa xoojin doonta muuqaalka muuqaalka qol kasta.
Qoyaanka jirka wuxuu hagaajiyaa iska caabbinta jirka ee cudurada, oo ay kujiraan cudurada viral, maxaa yeelay sifiican xuubka xuubka ee indhaha, sanka iyo afka ayaa caqabad wax ku ool u ah ciladaha jeermiga ee na soo weerara. Cabbitaanka biyo caafimaad leh oo nadiif ah ayaa waliba saameyn togan ku leh muuqaalka maqakeenna waxayna dib u dhigtaa hannaanka gabowga iyo sidoo kale muuqaalka laalaabkii. Hawo nadiif ah oo jirka ah waxay saameyn ku yeelataa baacsashada maqaarka ee ku habboon, taas oo si dabiici ah u ilaalinaysa jirkeena.
Biyaha jidhkeenu waa:
-kuntay nafaqada la siiyaa jidhkeena oo ay weheliso cunto
- shey ka mid ah unugyadayada
-regulator of functioning habboon ee xubnaha, oo ay ku jiraan maskaxda
- xakameynta heerkulka jirka
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, xasuuso inaad cabto ilaa 2 litir oo biyo ah maalintii. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka daawada qaadanaya oo la daalaa dhacaya xaalado caafimaad oo kala duwan.
Dhanka kale, baahida dhallaanka iyo carruurta yar yar ee biyo loo helo ayaa xitaa ka weyn. Caruurtu waa inay cabaan biyo saafi ah, oo ka samaysan macdan yar oo aan lahayn sonkorta, dhadhanka iyo indhaha.
Kuwani waa sababaha ay tahay inaad tixgeliso iibsashada biyo-cabitaan biyo keenaya gurigaaga ama aqalkaaga, maadaama ay dammaanad ka qaadayso helitaanka biyo nadiif ah oo caafimaad qaba. Waxay noqon doontaa shey aad wax ku ool u noqon kara qalabka jikada.
Biyo cabitaanka waxay u oggolaaneysaa u diyaarinta caafimaad qabka ah ee cunnooyinka iyo cabbitaannada qoyska oo dhan. Aaladahaani si fudud oo raaxo leh ayay u isticmaali karaan qof walba, xitaa xubinta ugu yar qoyska, maxaa yeelay waxaa lagu gartaa waxqabadka iyo adkeynta.
Bixiyeyaasha biyo-xoon-biyoodkabiyo kulul gudaha guriga hal qoys ahbiyaha kulul ee guriganadiifi biyaha tuubadabiyo bilaash ah gurigabiyaha gurigaBixiyeyaasha biyaha gurigaQiimaha Biiyaha biyaha gurigadib u eegista biyaha gurigaBixiyeyaasha biyaha ee WarsawBixiyeyaasha kaarboon-gaaska leh ee gurigaBiyo-kariyaha kaarboon-gaaska leh ee WarsawBixiyeyaasha biyaha gurigaBixiyeyaasha biyaha ee gurigaBixiyeyaasha biyaha guriga lagu caboBixiyeyaasha biyaha gugabiyo kaarboon ahBiyaha kaarboonku ku jiro gurigabiyo kululmaareynta biyaha gurigawaxa biyaha u shubaya gurigabiyo jilicsan gurigatoosan tubbadabiyo adag gurigabiyo u gaar ah gurigabiyaha gurigabiyo dhalaalaya oo guriga joogabiyaha macdanta gurigabiyo ku cabbo gurigabiyo dhadhan leh gurigabiyaha sodabiyaha gurigabiyaha guriga rakibaaddasagxadda guriga cusubbiyo caafimaad qaba gurigabiyaha tuubada caafimaadka qababiyo qabowbiyaha guga guriga
Eeg qaybaha kale: